I-Seychelles yoKhenketho ethembele kuMnyhadala wayo wokuqala woMzimba e-UK
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo » I-Seychelles yoKhenketho ethembele kuMnyhadala wayo wokuqala woMzimba e-UK
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • iintlanganiso • iindaba • Ukwakha kwakhona • Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlumayo zase-UK
Ukuqalisa iintlanganiso zorhwebo ngaphambi kokuba zisuswe kuluhlu olubomvu lwase-United Kingdom, ezokhenketho zase-Seychelles zichaze ukuba iiarhente ezizimase iTravel Gossip Roadshow kwizixeko ezithathu zase-UK ukusukela nge-16 kaSeptemba ukuya nge-22 kaSeptemba 2021, XNUMX, zazinethemba lokuhamba kwaye abathengi bazo banomdla wokuzama ixesha elide Ukutsala kwakhona.
Esi yayisisiganeko sokuqala somzimba e-United Kingdom okoko kwaqala ubhubhane ngo-Matshi 2020.
Urhwebo lokuhamba lwalunqwenela ukujongana ubuso ngobuso apho lwalunokunxibelelana kunye nokwakha ubudlelwane kwakhona.
Umboniso wendlela ohambahamba weGossip uqhagamshela iingcali zorhwebo kunye nabameli bendawo yokuya kwilizwe liphela.
Indawo ekuyiwa kuyo ibimelwe kuMboniso weNdlela yokuHamba eGossip obubanjelwe eLeeds, eBrighton, nasePortsmouth Seychelles yoKhenkethoUmphathi wentengiso e-UK, UNks Eloise Vidot, kwesi siganeko sokuqala somzimba kwingingqi ukusukela oko kwaqala ubhubhane nge-Matshi 2020.
Ukubuyela endleleni emva kweenyanga ezili-18 zeentlanganiso kunye nee-webinars lixesha elinomdla kuthi kwaye sinomdla wokusondeza indawo esiya kuyo kwiiarhente zase-UK. Ukhenketho lushishino lwabantu kakhulu, urhwebo lokuhamba belunqwenela ukujongana ubuso ngobuso apho sinokuthi sinxibelelane kwaye sakhe ubudlelwane kwakhona, utshilo uNkosazana Vidot.
Uye wongeza ukuba ngomsitho odibanisa iingcali zorhwebo kunye nabameli beendawo ezivela kwihlabathi liphela, "sikwazile ukukhuthaza iSeychelles njengendawo enomdla, ecacileyo, ethembekileyo nekhuselekileyo kwiiarhente zohambo lwangaphambili. Kubalulekile ukuba sakhe ukuzithemba kukhenketho nakwindawo esiya kuyo. ”
“Ukwamkelwa kweziganeko, okwenzeke ngokuhlwa, bekukuhle ngokwenene; Ndidibene ubuncinci neearhente ezingama-70 zomgangatho ezazibandakanyekile kwaye zazinomdla wokuphelisa ulwazi kunye neendaba zamva nje kwindawo ekuyiwa kuyo. Ngokubanzi, sabona umdla omkhulu kwindawo esiya kuyo, babenomdla omkhulu wokufunda ngakumbi kwaye baqale ukuthengisa kwakhona, utshilo uNksk. Vidot.
Ngokuhlwa kulandelwe ifomathi yeerobin ejikelezayo, kunye neeseshoni ezimfutshane apho ababonisi beza kuthi babonise iimveliso zabo kwiqela elincinci learhente ukuba lihambelane nemigaqo yokuphambuka eluntwini. Phakathi kweeseshoni, iiarhente kunye nababonisi baphathwa kwisidlo sangokuhlwa. Umnyhadala uphele ngerhafu elindelwe kakhulu.
Ethetha ngokuthatha inxaxheba kwendawo ekuya kuyo kulo msitho, UNksk Karen Confait, Umlawuli wezoKhenketho waseSeychelles e-UK nase-Ireland kunye namazwe aseNordic, uthe; Umboniso wendlela esihamba ngayo e-United Kingdom. Nangona iSeychelles yayiselapho kuluhlu olubomvu lwase-UK ngelo xesha, saziva kubalulekile ukugcina indawo esiya kuyo iphambili kwiingqondo zeearhente. Imvakalelo iyonke evela kwiiarhente yayiyenye yethemba. Abaxhasi babo banomdla wokuhamba ixesha elide kwakhona emva kweenyanga ezili-18 zokuba bahlale apha okanye bahambe bengekho eYurophu. Ukususwa kweSeychelles kuluhlu olubomvu sijonge phambili ekwamkeleni iindwendwe zase-UK kunxweme lwethu kwakhona. ”
Ukuqala kwe-4 kusasa nge-GMT, ngoMvulo, Okthobha 11, abahambi abavela e-UK, intengiso yesithathu enkulu yezokhenketho yaseSeychelles, banokuphinda batyelele indawo ekuyiwa kuyo kwisiqithi soLwandlekazi lwaseIndiya ngabahambi abakwaziyo ukufumana i-inshurensi yendawo ekuyiwa kuyo kwaye abagonyiwe akusafuneki ukuba bathathe iimvavanyo ze-PCR okanye babeke bodwa ihotele evunyiweyo xa bebuyela ekhaya.